Guangzhou Berlin Qaybaha Gawaarida Gawaarida Co., Ltd.
Land Rover Ac kombaresarada
Komatsu Ac kombaresarada
Kia Ac kombaresarada
Mahindra Ac kombaresarada
Mazda Ac kombaresarada
Mercedes Benz Ac kombaresarada
Mitsubishi Ac kombaresarada
Nissan Ac kombaresarada
Perodua Ac kombaresarada
Suzuki Ac kombaresarada
Toyota Ac kombaresarada
Volkswagen Ac kombaresarada
Chevrolet Ac kombaresarada
Hyundai Ac kombaresarada
Hayayaashii Power Steering
Tayada ugufiican Adeegga ugufiican
Waxaan soo saari karnaa kombaresarada TM13-TM31
Go'an & Barakac kala duwan
Waxaan soo saarnaa Go'an & Kombaresarada kala-beddelka beddela.
Rakibida Xirfadlaha Awoodda Haydarooliga Xirfadlaha Qiimaha Warshadda
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan soo saareyaasha Hawada Haydarooliga, Berlin oo ku takhasustay soo saarista kombuyuutarrada kombuyuutarrada kombiyuutarka iyo isteerinka haya. Badeecada haysa isteerinka waxay leedahay tayo isku mid ah oo wareega hawada ah. Heerkulka cimilada iyo qoyaanka qaraabo ayaa la isku daray si looga dhigo mid macquul ah.
Tayada Ugu Fiican ESP Iyo Jumlada Wadista Gawaarida Korantada
Ma dooneysaa inaad hesho shirkad qaybo baabuurta bixisa oo haysa qalab hagaya oo tayo sare leh? Hubi fiidiyowgaan oo ogow faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan ESP iyo isteerinka isteerinka korontada ee qiimaha jumlada ee ka imanaya Guangzhou BERLIN Parts Manufacturing Co., Ltd.
& adeegga suuq-geynta ee qaybaha AC-gaaga
& Qaybaha isteerinka
Waxaan leenahay R aad u xoogan oo khibrad leh
& D iyo kooxda QC oo ay hogaaminayaan injineerada Japan oo in ka badan 40 sano khibrad uleh
kumbuyuutarka, waxaan ku siineynaa OEM iyo adeegga suuqa kadib. Waxaan horumarin karnaa oo soo saari karnaa compresres ka 110cc-450cc, oo loo isticmaali karo baabuurka rakaabka, gaariga injineernimada iyo gaari qaboojiyaha. Haddii aadan ka heli karin badeecada aad ugu baahan tahay degelkeenna, si xor ah inaad noola soo xiriirto, waannu iska hubin doonnaa. Haddii aynaan haysan badeecada aad u baahan tahay, waxaan kuu horumarin karnaa sida aad u baahan tahay Waxaan kuu soo bandhigi karnaa sawir iyo muunad aad ku xaqiijiso
Kooxda injineerada Japan
leh khibrad 40 sano ka badan
Waxaan ka gudubnaa IATF16949
Dammaanad qaad hal sano ah
Waxaan siinaa gaariga OE
Alaabtayadu waxay ku guuleysteen shahaadooyin badan oo xagga tayada iyo hal-abuurnimada ah
Guangzhou BERLIN Qaybo ka Soosaarida Auto, Ltd, oo la aasaasay 2006, waa shirkad casri ah oo ku takhasustay soo saarida kombaresarada qaboojiyaha baabuurta. Shirkadeena waxay ku taalaa Zhuliao Aaga Warshadaha Baiyun Degmada Guangzhou City, oo dabooleysa aag 20 acres ah iyo aagga dhirta oo ka badan 10,000 mitir murabac. Waxay ku qalabeysan tahay gaadiid ku habboon 5KM oo ka fog garoonka diyaaradaha ee Baiyun iyo in ka badan laba boqol oo shaqaale ah oo ay ku jiraan in ka badan 50 farsamo yaqaanno xirfadlayaal ah. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale haysannaa R& Kooxda D iyo kooxda xirfadleyda iibka ah oo sugaya inay ku siiyaan adeegga kuugu fiican.
Shirkaddu waxay leedahay koox maarayn tayo sare leh leh. Waxay ka gudubtay shahaadada IATF16949 waana mid ka mid ah soo saarayaasha gudaha ee tirada yar ee si otomaatig ah u shaqeynaya. Waxay soo bandhigtay noocyo kala duwan oo soosaarid iyo qalab tijaabo ah oo ay ka mid yihiin khadadka japanku si buuxda kombiyuutarka isugu geeyo, xarunta makiinada, kursiga keydka tijaabada ee Taiwan, qalabka wax lagu shubo ee Jarmalka ee helium, mashiinka nadiifinta ultrasonic, qalabka faleebada faakiyuunka, iskuxirka iyo cabirka qalabka, mikroskoobka qalliinka, qalabka cabirka pneumatic , Tijaabada gariirka, Mashiinka baaritaanka lagu buufiyo milixda iwm Waxaan leenahay xakameyn tayo oo adag qeybaha kasta oo aan sameynay Waxaan haynaa tiknoolajiyad iyo maareyn maamul oo ku saabsan sahaminta iyo khariidaynta muunadda, horumarinta caaryada, ka shaqaynta maran, tijaabooyinka waxqabadka.
Waxaan haynaa saddex nooc oo badeecooyin ah kuwaas oo kala ah Kombaresarada Is-beddala Isbeddelka Is-bedbeddela, Kombaresarada Is-bedbeddelaya ee Is-bedbeddela iyo Kombaresarada Is-bedbeddelaya Waxaan ku dadaalnaa inaan helno oggolaanshaha macaamiisheena oo aan ku aaminno tayadeena joogtada ah, qiimaha tartanka iyo adeeg aad u fiican. Wax soo saarkayaga waxaa loo dhoofiyaa Yurub, koonfurta iyo waqooyiga Ameerika, bariga dhexe iyo koonfur bari Aasiya iwm.
U hogaansanaanta ujeedada "saldhigyada horumarineed ee tayada, sumcadu waxay ku tiirsan tahay kalsoonida" iyo mabda'a maaraynta "in loo abuuro qiimo macaamiisheena, shaqaalaheena iyo la-hawlgalayaashayada", waxaan u badalaynaa tikniyoolajiyad casri ah alaab tayo sare leh oo loogu adeegayo bulshada iyo waxay gacan ka geysaneysaa horumarinta warshadaha baabuurta Shiinaha.
Tayo lagu kalsoonaan karo si loo daboolo baahida macaamiisheena
Waxyaabaheena waxaa loo dhoofiyaa Yurub, koonfurta iyo waqooyiga Ameerika, bariga dhexe iyo koonfur bari Aasiya iwm Waxaan leenahay macaamiil aduunka oo dhan. Kombaresaradayadu dhammaantood waa cusub yihiin, dhammaan qaybaha ayaa ka socda alaab-qeybiyaha OE oo leh hal sano oo damaanad ah Waxaan nahay alaab-qeybiye OE ee warshadda Gawaarida.
Waxaan haysanaa in kabadan 14 sano ‘khibrad soosaarid iyo soo saarida hagitaanka gaariga Waxaan sidoo kale siinnaa noocyada istiraatiijiga ah ee qaybaha ugu sarreeya Waqooyiga Ameerika iyo Ruushka.
Fadlan ka tag macluumaadka xiriirka, waxaan kuu soo bandhigi doonaa adeegga VIP-da-mid-ka-mid ah dhowaan.